သားအိမ်တွင်းထည့် ကြေးနီ IUD | သိလိုရာမေး
သားအိမ်တွင်းထည့် ကြေးနီ IUD
သားအိမ်တွင်းသို့ ထည့်သွင်းရသည့် သေးငယ်သော ပလတ်စတစ်နှင့် ကြေးနီကိရိယာဖြစ်ခြင်း၊
အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ (၅)နှစ်မှ (၁၀)နှစ်အထိ တာရှည်ခံခြင်း၊
လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ကုသပေးသူထံ သွားရောက်ပါ။
ကြေးနီ IUD (သို့မဟုတ်) သားအိမ်ထဲထည့် သောကိရိယာဆိုတာ သားအိမ်ထဲထည့်ရတဲ့ ကြေးနီအုပ်ထားတဲ့ ပလတ်စတစ်အပိုင်းအစလေး ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်က ထည့်သွင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ IUD တွေဟာ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး (၅)နှစ်ကနေ(၁၀)နှစ်အထိ ကိုယ်ဝန်ရမလာအောင် တားဆီးပေးနိုင်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ကိုယ်ဝန်လိုချင်လာတယ်ဆိုရင် IUD ကို အချိန်မရွှေးဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီး ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ချက်ချင်းဘဲ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေပြန်ရှိလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ IUD (၃)မျိုးဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘေးနှစ်ဖက်နဲ့ ကိုယ်ထည်ကို ကြေးနီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ IUD တွေဟာ T ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ အခြေခံIUD ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိရိယာဟာ အမျိုးသမီးတွေကို (၁၀)နှစ်ကြာအထိ ကိုယ်ဝန်ရမလာအောင် တားဆီးပေးနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ IUD ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ထည်ကို ကြေးနီနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပြီး ငါးရိုးသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ IUD ကို အများအားဖြင့် ငါးခေါင်းရိုးသဏဏ္ဍာန်ရှိသားအိမ်တွင်းထည့် ကိရိယာလို့ လူသိများကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ကိရိယာဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိမလာအောင် (၅)နှစ်ကြာအထိ တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်သွေးတစ်မွှေးပြည့်ဖြိုးလာစေတဲ့ ကိရိယာဟာ သွယ်လျတဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့ ရင်သွေးမရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးများအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကြေးနီYဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံးပေါ်IUD ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိရိယာဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိမလာအောင် (၅)နှစ်ကြာအထိ တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းရာမှာ သားအိမ်လည်တံရှည်ထွက်လာစေဖို့ ဆန့်ထုတ်စရာမလိုအပ်ဘဲ ထည့်သွင်းနေစဉ်ခံစားရတတ်တဲ့နာကျင်မှုတွေ လျော့ပါးစေဖို့ ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
IUD တွေဟာ ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ချက်ချင်း စတင်လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် အမျိုးသမီးတွေဟာ အဲ့ဒီ့ကိရိယာကို ခံစားသိရှိနေရတာမျိုးဖြစ်မနေသင့်ပါဘူး။
IUDတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကြေးနီက သုတ်ပိုးတွေလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ရောနှောသွားပြီး ၎င်းတို့ သားဥတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး မျိုးအောင်ခြင်းကနေ တားဆီးပေးပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ပုံက တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေပေမယ့် အဲ့ဒါက လက်ဖွဲ့အဆောင်တစ်ခုလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
လတစ်လရဲ့ဘယ်အချိန်မှာမဆို IUD ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသူအများစုက IUD ကိုရာသီလာချိန်အတွင်း ထည့်သွင်းချင်ကြပေမယ့် သင့်ကိုယ်သင်ကိုယ်ဝန်မရှိသေးဘူးလို့ သေချာနေသမျှကာလပတ်လုံး IUDကိုအချိန်မရွှေး ထည့် သွင်းနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်က ရာသီလာနေတဲ့အချိန်ကာလအလယ်မှာ သားအိမ်ရဲ့အဝဖြစ်တဲ့ သားအိမ်လည်တံအပွင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်တော့ အဲ့ဒီအချိန်မှာ IUD ထည့်သွင်းတာက သင့်အတွက်အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ကိရိယာကို အဆင်ပြေပြေထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် ဆရာဝန်က ကြိုးကိုညှပ်ပစ်ပြီး ၎င်းကိုပြန်ဖယ်ရှားလို့ရမယ့်အရှည်လောက်ဘဲ ထားခဲ့မှာမို့လို့ သင်က IUDနေရာတက ရှိနေရဲ့လားဆိုတာကို စစ်ကြည့်နိုင်မှာပါ။ (ယောနိလမ်းကြောင်းကနေ ကြိုးစတွေထွက်နေမှာ မဟုတ်ပါ)။
IUD ထည့်သွင်းနေစဉ်အတွင်းမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေ ခံစားရတာကတော့ ပုံမှန်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ ကုသလိုက်ရင် ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့ ခေါင်းမူးခြင်းခံစားရတတ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းပြီး(၂)ပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဝက်ခြံထွက်တာ (ဒါမှမဟုတ်) နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေ ခံစားရနိုင်ပေမယ့် ပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။
IUD ထည့်သွင်းပြီးပါက နေရာမှန်တွင်ရှိမရှိကို တစ်လတစ်ခါ ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။ ရာသီလာနေတဲ့ အချိန်မှာ စစ်ဆေးလို့ ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ဒါကဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရာသီလာနေချိန်မှာ မိမိသားအိမ်ခေါင်းက သာမန်ထက်ပိုကျယ်ပြီးပိုပွင့်နေတာကြောင့် IUD လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် IUD နေရာလွဲနေတယ်ဆိုတာက ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။
IUD နေရာမှန်မှန် သင်ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးမယ်ဆိုပါက –
(၁) လက်ကို ရေနွေး ၊ ဆပ်ပြာ တို့ဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။
(၂) ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပါ (အိမ်သာတက်သလိုထိုင်ပါ)
(၃) လက်တစ်ချောင်း (သို့) နှစ်ချောင်းဖြင့် သင်၏ ယောနိထဲသို့ နှိုက်သွင်းပါ (သားအိမ်ခေါင်းထိ) ။ နှာခေါင်းထိပ်သို့ ထိုးနှိုက်သကဲ့သို့ သင်၏ သားအိမ်ခေါင်းသည် အနည်းငယ် တင်းမာလာသလိုခံစားရမည်။
(၄) IUD ကြိုးရှိမရှိ စမ်းသပ်ခံစားပါ။ IUD ကြိုးရှိသည်ဟု ခံစားမိပါက နေရာမှန်တွင် ရှိနေပါသည်။ အကယ်၍ IUD ကြိုးရှိသည်ဟု မခံစားမိပါက (သို့) IUD ၏ အောက်ခြေသည် သားအိမ်ခေါင်းသို့ ရောက်နေသည်ဟု ခံစားမိပါက IUD နေရာလွဲနေပါသည်။ ထိုသို့ IUD နေရာလွဲနေပါက မိမိဘာသာ ပြန်လည်တည့်မတ်ဖို့ မကြိုးစားပါနှင့်။ ဆရာဝန်နှင့် ပြသဆွေးနွေးပါ။ တခြားသော အရန်သားဆက်ခြားနည်းများကို အသုံးပြုပါ (ဥပမာ – ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း)
IUD တွေက ကင်ဆာ၊ ပြည်တည်နာနဲ့ ကလေးမွေးဖွားခဲ့ရင်လည်း မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေ မဖြစ်စေပါ။
IUD တွေက ခန္ဓာကိုယ်တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေ (ဦးနှောက်၊ နှလုံး) စတဲ့နေရာတွေကို မရွေ့သွားနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ဖူးသေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
IUD ထုတ်ပြီးနောက် သားပျက်သားလျှောဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အတူနေစဉ်မှာ အမျိုးသမီးတွေကို သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်စေတာ နာကျင်စေတာမျိုးတွေ မရှိပါ။
ဟော်မုန်းပါဝင်မှုမရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆေးဝါးများနှင့် ဓာတ်ပြုမှုမရှိခြင်း၊
နေ့တိုင်း(သို့မဟုတ်) လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါတိုင်း သန္ဓေတားမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး တွေးပူစရာမလိုခြင်း၊
IUD ထည့်သွင်းထားပါက အချိန်မရွှေး လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း၊
အလွန်အမင်းအားစိုက်ထုတ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေကို အလွန်ကြာရှည်စွာ တားဆီးပေးခြင်း၊
ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့် သွေးတိုးရောဂါရှင်များ၊ ဆီးချိုရောဂါရှင်များအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပူပန်ကြတာကတော့ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးအများစုအတွက်ကတော့ ဒါတွေက ပြသနာတစ်ရပ်မဟုတ်ကြပါဘူး။ သင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်လည်း ဒါတွေကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပျောက်ကင်းသွားမှာပါ။အများဆုံးစောဒကတတ်တာတွေကတော့-
ရာသီလာချိန်အတွင်းမှာ ဝက်ခြံထွက်ခြင်း (အထူးသဖြင့် IUD ထည့်သွင်းပြီးပြီးချင်း လအနည်းငယ်အတွင်း)၊
IUD ချော်ထွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) နေရာတကျရှိမနေခြင်း၊
IUD သားအိမ်နံရံများထဲသို့ တွန်းဝင်သွားခြင်း၊
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ ထည့်သွင်းတဲ့ပုံစံတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်)
Lydia Copper Y 380 IUDs မှာ ၉၉% ကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးရနိုင်သောအမျိုးအစားဖြစ်ကာ သက်တမ်း ၅နှစ်တာကြာရှည်ခံနိုင်ပါသည်။
Lydia Copper Y IUD ကို ထည့်သွင်းစဉ် နာကျင်မှုနည်းနိုင်သမျှနည်းစေရန်နှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ မိခင်၏နို့ထွက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်မပေးသည့်အပြင် ပစ္စည်းကို ထုတ်လိုက်သည်နှင့် နဂိုအတိုင်း ကိုယ်ဝန်ရရှိစေနိုင်ပါသည်။
Lydia Copper Y 380 IUDs offers almost complete protection (99%) against pregnancy and remains effective foraperiod of5years once inserted. It is the first IUD of its kind in Myanmar.
Lydia Copper Y IUD is designed to decrease pain and discomfort of patient during the insertion process since less dilation of the cervix is required. It does not affect lactation. This isafully reversible method and protection is reversed on its removal.